Indlu Esemaphandleni - eNew Bern - I-Airbnb
Indlu Esemaphandleni - eNew Bern
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguShirley
Ukuziva ungasetyenziswa nangabanye abantu kwindawo elungele izilwanyana zasekhaya! Kwimayile nje eziyi-5 ukusuka kwidolophu, indlu yethu esemaphandleni inomxholo wolwandle kunye neyadi yezilwanyana zasekhaya ebiyelweyo. I-IKEA king size bed kwigumbi lokulala kunye neenkosi ezitofotofo kwigumbi lokuhlala. Iveranda enkulu ihloliwe ukuze kungabikho zingcongconi!
Indlu esemaphandleni yindlu enamagumbi okulala ayi-795 ekwicomplex enamagumbi okulala ayi-7 ekwindlu yethu ekwi-acre ezisixhenxe ejongene nomhlaba apho amahashe ethu amabini ahlala khona. Ifikelelwa yindlela yayo yemoto kwaye inendawo eyaneleyo yokupaka iimoto kunye ne-trailer yamahashe okanye i-trailer yesikhephe. Umphandle ukhanya kakuhle, ngoko akukho ngxaki ngokufika ebusuku. Igumbi lokuhlala lineendawo zokuhlala ezine (ukuba usebenzisa izitulo zokutyela), isofa ekhupha ibhedi enkulu etofotofo, indawo yokutyela, igumbi lokuhlambela eliyihafu, isikrini esineflethi, iTV ephucukileyo, kunye neveranda enkulu - kunye nokubona ukuphuma kwelanga - kumnyango owenziwe ngeenyawo ezisibhozo. Kwiveranda, unokuphumla kwizitulo ezine ze-Adirondack ngoxa iimvuthuluka zakho zipheka kwi-grill yegesi. Ikhitshi elincinci kodwa elisebenzayo linefriji, isitovu, i-microwave, i-toaster, umatshini wokwenza ikofu, iimbiza neepani, izitya, izinto zokupheka nezitya. Kukho indawo yokuhlala abantu ababini etafileni. Igumbi lokulala linamagumbi aliqela ibe linebhedi enkulu, ikhabhathi yeempahla ezimbini, idresa nedesika yekhompyutha. Umnyango ongasemva uvulela inja ebiyelweyo, ngoko ungavumela abahlobo bakho abanoboya ukuba “bahambe.” Kwigumbi lokuhlambela eliphambili uza kufumana iveni enkulu, ishawa nomatshini wokuhlamba nowokomisa impahla. Yhoo, kwaye kukho nekhowudi! Yonke indawo inethayile, kwaye kukho ukuhonjiswa kolwandle kuyo yonke le ndawo.
Ekubeni sihlala kwizakhiwo (nokuba besingenjalo), asifuni ukuba Indlu Esemaphandleni ibe yindawo yokuzilolonga okanye yokuzilolonga! Sifuna ukuba uzive usekhaya kodwa uhloniphe ikhaya lethu, izilwanyana zethu nabamelwane bethu.
Ngoxa yonke imigangatho yeethayile yenza kube lula ukuphila, inokuphola phantsi kweenyawo zakho. Sinee-slipper zamabhinqa, kodwa unganqwenela ukuzisa ezakho ii-slippers.
I-Wifi – i-31 Mbps
32" HDTV ene-I-Roku
Indlela engenazitepsi eya kumnyango wondwendwe
4.96 out of 5 stars from 550 reviews
4.96 · Izimvo eziyi-550
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi550
Indlu esemaphandleni imalunga neebloko ezimbini ukusuka kuMlambo iNeuse. Indawo yethu ethe cwaka ngumxube wayo yonke into ukusuka kwizindlu eziphakamileyo eziphambi komlambo ukuya kwiipaki ze trailer kwaye kulula ukuhamba ngeenyawo okanye ngebhayisekile xa kukho abantu abambalwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Shirley
Izimvo eziyi-1 173
Horses in my backyard was a life long dream. I hope you experience a little of your dream while staying with us. Thoughts become things so choose the good ones.
Sihlala kwizakhiwo, ngoko phantse sisoloko sifumaneka ukuba ufuna uncedo. Siyakuvuyela ukudibana nabantu abatsha, ngoko sinokuthatha inxaxheba (okanye kube nzima) njengoko ufuna ukuba sibe. Zonke iindwendwe zinesimemo sokuma kunye nam ekuseni!
Sihlala kwizakhiwo, ngoko phantse sisoloko sifumaneka ukuba ufuna uncedo. Siyakuvuyela ukudibana nabantu abatsha, ngoko sinokuthatha inxaxheba (okanye kube nzima) njengoko ufuna u…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- New Bern